Meksika: Mitantara ny Tsiambaratelony ao Amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2017 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, Español, Swahili, Français, English
Fantatr'ilay mpanoratra, Rafa Saavedra, tsara ny miafinafina rehetra amin'ny kolontsain'ilay tanàna meksikàna Tijuana, any amin'ny sisintany iraisany amin'i Etazonia. Ny tsirairay amin'ireo tetikasa elektronika ataony dia resaka fiainana literatiora avokoa. Namoaka tantara fohy sy tetikasa vitsivitsy izy ao amin'ny bilaoginy Crossfader Network [amin'ny teny espaniola] ary mpampiasa mavitrika ny Twitter, @rafadro, izay ampiasainy ho toy ny loharanon'ny asa famoronany. Ny tetikasany farany amin'ny resaka literatiora sy elektronika, nomeny lohateny hoe Soweird, dia mampifangaro ny tantara bitika foronina, ny tsiambaratelo ary ny Twitter.
Tamin'ny Jolay 2009 lasa iny, nangatahany ireo mpamandrika azy maherin'ny 200 tao amin'ny Twitter mba hizara izay tsiambaratelo goavana any amin'izy ireo (na farafaharatsiny izay tsambaratelo keliny, hoy izy niòefitra taty aoriana), mba ho fandraisana anjara amin'ny famoronana lahatsoratra iray misy mpitantara marobe. Niaraka tamin'ireo tsiambaratelo maherin'ny 40 voarainy tamin'ny Twitter no teraka ny Soweird, fifangaroanà zavatra noforonina sy ny tena marina tao anaty fizaràna ireo fotoana 22 niresaka firaisana ara-nofo, henatra ary zavatra ratsy natao. Ny tantara farany, afaka hita ao amin'ny bilaoginy amin'ny teny espaniola sy anglisy, dia tokony ho ao anatin'ny gazetiboky miresaka literatiora El Perro [espaniola] no hivoaka.
Araka ny lazain'i Rafa Saavedra, ny fanoratana bilaogy bitika dia lasa lavitra noho ny fitantarana fotsiny ireo antsipirihany tsy misy dikany: « Ao amin'ny Twitter, matetika ny olona no mibaboka zavatra kivalavala tsy eritreretina akory, mampihomehy sy mahamenatra. Misy mihitsy aza tenifototra iray #yoconfieso [esp.] (« mibaboka aho). Araka izany, raha tokony ho ny tsiambarateloko no aborako, nanapaka hevitra aho fa hahaliana kokoa ny mitrandraka ny tsiambaratelon'ny hafa. Nanontany tena aho hoe hatraiza no ho sahin'izy ireo haleha, ahoana no hanamarihako ny fahasamihafàn'ny sary izay nanànako momba ireo mpampiasa Twitter, raha mitaha amin'ilay sary omeny ny mpanjohy azy. Fijery vetavetan'ny mpanoratra 2.0 »
Tsy ny Soweird no voalohany tamin'ny tetikasan‘i Rafa Saavedra nampihaonany ny Twitter sy ny literatiora. Tamin'ny 2007, izy no tomponandraikitra taminà tetikasa iraisana Microtxts, izay nahangonana tantara kely 238 noforonina, tamin'ny fampiasàna ny anarana hoe @microtxts [espaniolal] ary navoakan'ireo trano famoahamboky meksikàna Replicante [es] sy Balbuceo. « Nanasa namana maro aho, mpanao gazety, mpianatra amin'ny resaka fifandraisana, ary ireo olona noheveriko fa mety ho liana amin'ny famoronana lahatsoratra bitika tsy itononana anarana ary manao andiany. Ny fotokevitra ijoroan'ilay atrikasa dia ny hoe: ny manoratra dia mizara. Tany ampiandohana, tsy takatr'izy ireo tsara ny fahafaha-mihetsiky ny Twitter, na ny dingan'ny fanoratana sy ny tsy fitononana anarana. Saingy, tratra ihany ny isa 100 ho an'ny mpandray anjara,» hoy ny fanehoankeviny tanaty tafa iray.
8 ora izayVenezoela